Umngcipheko wothando olugqithisileyo | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 20/07/2021 22:36 | Ubudlelwane
Ukukwazi ukuthanda umntu yinto entle kakhulu kangangokuba abantu abaninzi banethamsanqa lokuziva. Nangona kunjalo, xa kufikwa ekuthandeni kubalulekile ukuseka uthotho lwemida kuba kungenjalo olo thando lungajika lube yinto eyingozi kuye.
Kwinqaku elilandelayo sikubonisa umahluko okhoyo phakathi kothando olusempilweni kunye nokuthatheka.
1 Ukuqwalaselwa akulingani nothando
2 Yintoni omele uyenze malunga nokuziphatha okugqithisileyo
Ukuqwalaselwa akulingani nothando
Kubudlelwane obusempilweni, uthando kufuneka luhlale lukhona. Ukuba, ngokuchaseneyo, ukutyekela kuphelela ukuvela, esi sibini siba yityhefu ngayo yonke into embi ebandakanya oko.
Ukubonakala kokuziphatha okungalawulekiyo ikakhulu kubangelwa kukusilela kokhuseleko kunye nokuzithemba lelinye lamaqela kubudlelwane. Kwelinye icala, ukutyeba kuphelisa ngokupheleleyo inkululeko yeqabane kwaye iyakuthintela kuzo zonke iintlobo zezenzo, into engavumelekanga kulo naluphi na uhlobo lobudlelwane.
Ngokwalo uthando lunika inkululeko nentlonipho, into ebaluleke nakusiphi na isibini esizijonga njengabantu abasempilweni. Kukho ukuzibophelela okuthile kubo bobabini abantu, kodwa abanamda phantsi kwazo naziphi na iimeko, into enefuthe elihle kwikamva elihle lesi sibini.
Yintoni omele uyenze malunga nokuziphatha okugqithisileyo
Awunakho phantsi kwazo naziphi na iimeko uvumeleke ukuba uqhubeke nolwalamano apho isimilo esingalawulekiyo somelele ngaphezu kwayo nayiphi na enye. Iqela lesifundo kufuneka libuphelise kwangoko ubudlelwane obunobungozi. Kubalulekile ukuba esi sibini sihlale phantsi kwaye sihlalutye imeko ngendlela ezolileyo kwaye ujonge izizathu zokuba kutheni uthando olunje lukhona.
Uvelwano lubalulekile xa ujongene nale ngxaki. Kulungile, ke ngoko, ukuba umntu othe phithiyo unokuzibeka ezicathulweni zesifundo, ukuze azive kwaye azi ukuba indlela yokuziphatha egwenxa ngokupheleleyo. Uthando kwisibini lithetha ukuhlonipha umntu omthandayo kunye nokukwazi ukubathemba ngokungaboni.
Kwiimeko ezininzi, olo thando luthando lubangelwa ikakhulu kukungabikho kokhuseleko kunye nokuzithemba. Kubalulekile ke ngoko ukuba uncede umntu othe tye ukuba abuye ngokukhawuleza ukuzithemba kwaye ukomeleza ukuzithemba kwakho. Ukoyisa ukungazithembi kubalulekile xa kuziwa ekuhlonipheni iqabane lakho kwaye ukwazi ukulithanda ngendlela esempilweni.
Ukuba izinto aziphucuki, kuyacetyiswa ukuba uye kwingcali elungileyo ngubani owaziyo ukusombulula ingxaki kwasekuqaleni kwaye abeke isisombululo kuyo. Lonke uncedo aluncinci ukuze woyise ukuthanda izinto phambi kwesi sibini.
Ngamafutshane, nangona uninzi lwezibini zingaziboni iingxaki zazo, Ukuthanda akufani nokuthathela ingqalelo umntu omthandayo. Uthando kufuneka lube sempilweni ngalo lonke ixesha kwaye isiphelo salo kufuneka siguquke kunye ukuze ufumane ukonwaba kunye nolonwabo. Ukwenza oku, kufuneka uqale uzithande kwaye uzithande kwaye ukusuka apho, ukwazi ukuthanda iqabane lakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Ingozi yothando olugqithisileyo